HomeWararka MaantaBenzema Oo Ka Sheekeeyey Baaskii Cidhibta ahaa ee ay dadku La Yaabeen
Weeraryahanka Muslimka ah ee afka hore uga ciyaara Real Madrid ee Karim Benzema ayaa ka hadlay baaskii cidhibta uu ugu dhiibay Cristiano Ronaldo kaas oo uu isna ku hubsaday shabaqa Barcelona.
Benzema Waxa uu sheegay in uu dareemayo isku kalsooni badan, taasina ay u saamaxday in uu u ciyaaro sida uu doono khaastan in uu dhiibi karo kubadaha isaga oo sii jeeda, isaga oo ku nuuxnuuxaday in uu isku deyi doono in uu sameeyo farsamooyin cusub oo uu ku soo kordhiyo xirfaddiisa.
Benzema oo ugu horreyn ka hadlaya guul-darradii kooxdiisa ka soo gaadhay kulankii Clasico waxa uu yidhi: “Waa ceeb, waayo annaga ayaa cid walba guusha ka doonista badnayn”.
Karim oo ku sugan dalkiisa France oo Khamiista ay magaalada Paris ciyaar saaxiibtinimo ku wada yeelan doonaan Brazil, ayaa isaga oo ka hadlaya baaska cidhibta ah ee uu u dhiibay Ronaldo waxa uu yidhi: “Marka aad si buuxda naftaada ugu kalsoon tahay waxa aad isku dayeysaa waxyaabo kala duwan. Tani ciyaartayda ayay ka mid ahayd, waxaanan goolka ugu sameeyey Cristiano. Kubaddu way iga dambaysay, sida ugu wanaagsan ee aan samayn karayeyna waxayy ahayd cidhibtaas. Waxa aan doonayaa in aan sii wado isku dayga noocaas ah iyo inaan sidaas u dhaqaaqo sababtoo ah waan ku raaxaystaa waxyaabahaas oo kale.”
“Cidhibta noocaas ahi waxay la mid tahay adigoo gool dhaliyey khaasatan ka dhaliyey Clasico. Waa in aad ku faraxdo in badan sababtoo ah waa muhiim in aad dhamaystirto baas wanaagsan oo uu qof kale dhaliyey.”
Benzema waxa uu soo dhoweeyey Luka Modric oo ka soo laabtay dhaawac, waxaanu yidhi: “Waxa aanu samaynay fursado, si fiicanna waanu u ciyaarnay. Aad ayay noogu wanaagsanayd in uu Modric soo laabto, waayo mar walba wuu naga dambeeyaa sidaas ayaanu muhiim noogu yahay. Waanu u darsanay.”
Karim waxa kale oo uu tibaaxay in ay dib u soo noqotay kalsoonidii ciyaartooyadu, isla markaana ay sii wadi doonaan in ay sidii Barca ula ciyaaraan kulamada hadhay, khaasatan Sevilla iyo Valencia.
Waxa uu hoosta ka xariiqay in ay ku dedaali doonaan in ay ka faa’iidaystaan dhibic kasta oo ka khasaarta Barcelona si ay horyaalka sannadkan u qaadaan.
Benzema waxa kale oo uu ka hadlay kooxda Altetico Madrid oo ay isku beegmeen tartanka Champions League, waxaanu tibaaxay in ay noqon doonto ciyaar adag. “Waxay noqon doontaa ciyaar adag sidii ay horeba u ahaan jirtay, laakiin Real Madrid mar kasta sare ayay u qaadaa ciyaaraha Champions League. Waanu ku faraxsannahay in aanu ka ciyaarayno Yurub.” Ayuu hadalkiisa ku soo gebogebeeyey.
Germany + USA Oo Iska Xaadiriyey Wareega 16 Ka & Ronaldo Oo Ka Huleelay Koobka Aduunka
AC Milan Oo Xaalad Adag Madaxa La Gashay Iyo Booliska Talyaaniga Oo Baadhis Ku Gelalafay
16/01/2018 Abdiwahab Ahmed